Honor Play: Ho tonga ny smartphone amin'ny 5 Jona | Androidsis
Honor Play: ny smartphone amin'ny lalao vaovao dia haseho amin'ny 5 Jona
Eder Ferreno | | Finday
Toa nahita fironana vaovao ny tsenan'ny telefaona Android. Ireo dia smartphone finday, izay efa nihaonantsika roa tao anatin'ny roa volana lasa. Na dia izao aza tonga vaovao, amin'ny marika sinoa. Izy io dia ny Honor Play, izay haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 5 Jona. Miaraka amin'ity fitaovana ity dia te-handroso lavitra kokoa ilay marika.
Satria milaza izy ireo fa Hanome traikefa 4D ity Honor Play ity, araka ny iantsoan'izy ireo azy, ary hanana fisianà faharanitan-tsaina artifisialy be izany. Tena tsara izany. Inona koa no azontsika antenaina amin'ny telefaona?
Ny sasany amin'ny antsipiriany momba ny fitaovana dia fantatra hatramin'izao. Hanana a Efijery 5,84-inch miaraka amin'ny tahan'ny 19: 9, Ka hanana ny notch ao isika, miaraka amin'ny vahaolana 2.280 x 1.080 teboka. Io ihany ilay efijery izay ananantsika ao amin'ny Honor 10. Ka dia averin'izy ireo ho an'ity Honor Play ity.
Ankoatra izany, hanana bateria 2.900 mAh izy, izay amin'ny taratasy dia toa fohy. Satria mandany betsaka kokoa ny telefaona filalaovana. Ka tsy maintsy hojerentsika hoe inona ny processeur ananany, izay mbola manome fanjifana tsaratsara kokoa. Na dia mampanantena ny ho teboka malemy amin'ny fitaovana aza io. Any aoriana dia hisy fakan-tsary 13 + 2 MP.
Mampanantena hanome voninahitra traikefa 4D ity Honor Play ity, araka ny filazan'ny orinasa azy manokana. Na dia hatreto aza dia tsy voalaza mazava hoe inona no fonosin'io fiasa io. Mety hiandry ny hetsika isika vao hahalala bebe kokoa momba azy.
Ny ampahany tsara dia ny fiandrasana hahafantatra ity Honor Play ity dia tena fohy. Ity hetsika marika ity dia voalahatra amin'ny 5 Jona izay hahafahantsika mahafantatra ny smartphone vaovao filalaovana izay ho tonga eo amin'izao rehetra izao Android. Ahoana ny hevitrao momba ity finday vaovao ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Honor Play: ny smartphone amin'ny lalao vaovao dia haseho amin'ny 5 Jona
Avereno jerena ny Bluboo D5 PRO, ny fahadisoam-panantenana lehibe !!